လျင်မြန်စွာအိပ်မောကျနိုင်စေဖို့ - YOYARLAY Digital Media and News
Published: December 22, 20178:09 am Updated: February 14, 20194:29 pm
မြို့ပြရဲ့ ၂၄နာရီ ကာလမပြတ် လှုပ်ရှား သွားလာနေရမှု များကြောင့် ကျွန်တော်တို့တွေဟာ အိပ်ချိန်ကို အချိန်များများ မပေးနိုင်ကြပါဘူး။ အိပ်ချိန်တွေ လျော့နည်းကြပါတယ်။ ရှည်ကြာတဲ့ အလုပ်ချိန်တွေ၊ လုပ်ငန်းခွင် လိုအပ်ချက်တွေ၊ နည်းပညာကို လွန်ကဲစွာအသုံးချမှုတွေ၊ social media ထိတွေ့မှုတွေ၊
ဝလာခြင်း၊ ရုံးထိုင် လုပ်ကိုင်ရတဲ့ နေထိုင်မှုဘဝတွေ၊ ခရီးသွားလာရခြင်းတွေဟာ ကိုယ့်ရဲ့အိပ်ချိန်တွေကို တစ်နေ့နဲ့တစ်နေ့ မတူဘဲ အစီစဉ်မကျအောင် ဖန်တီးနေတဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အိပ်ရေးမဝခြင်းကြောင့် သွေးတိုးရောဂါ၊ ဆီးချိုရောဂါ၊ အဝလွန်ရောဂါကဲ့သို့သော နာတာရှည်ရောဂါတွေ ခံစားရလာဖို့ အလားအလာ ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့တွေဟာ အိပ်ချိန်နဲ့ အိပ်ရာထချိန် အစီအစဉ်ဇယားလေး တစ်ခုချမှတ်ဖို့ လိုအပ်လာပါပြီ။
၁) အခန်းအပူချိန်ဟာ သင့်ရဲ့အိပ်စက်ခြင်းကို ဘယ်လောက် အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိစေတယ်လို့ ထင်ပါသလဲ?
တကယ်လို့ သင်ဟာပိုမိုအေးမြတဲ့ ဝန်းကျင်တစ်ခုမှာရှိနေမယ်ဆိုရင် အိပ်စက်ခြင်းကိုပိုမိုလွယ်ကူချောမွေ့ စေမှာပါ။ ၆၅ ဒီဂရီခန့်ရှိတဲ့ အေးမြတဲ့အခန်းတစ်ခုဟာ အိပ်စက်ခြင်းအတွက် အသင့်တော်ဆုံးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန် လျော့နည်းလာတဲ့အခါ ငိုက်မျဉ်းခြင်းကို ဖြစ်စေပါတယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်ဟာ အရမ်းကိုပူလွန်းနေရင် သင့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ သဘာဝအပူချိန်ကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေပြီးတော့ တစ်ညတာလုံး အိပ်မပျော် ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
၂) သက်တောင့် သက်သာဖြစ်စေတဲ့ မွေ့ရာသို့မဟုတ် ခေါင်းအုံးရှိပါသလား?
မွေ့ရာရွေးချယ်ခြင်းဟာ အလွန်ကို အရေးကြီးပါတယ်။ မွေ့ရာတစ်ခုဟာသင့်ကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ အိပ်စက်နိုင်အောင် အထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်။ အိပ်စက်တဲ့အခါ ကျောဘက်နဲ့ လည်ပင်းတွေ နာကျင်မှု မရှိစေအောင် အရမ်းမမာလွန်း မပျော့လွန်းတဲ့ မွေ့ရာမျိုးကိုရွေးချယ် သင့်ပါတယ်။ မွေ့ရာက အရမ်းပျော့ပျောင်းလွန်းနေရင် အိပ်စက်တဲ့အခါ ပူတဲ့ခံစားမှုကိုရရှိစေပြီးခါးနောက်ကျောဘက် နာကျင်မှုကိုခံစားရစေပါတယ်။ အရမ်းမာလွန်းနေလျှင်လည်း တင်းပါးရိုးတွေ နာကျင်စေပြီးခေါင်းနောက်ကျော ဘက်ကိုနာကျင်စေပါတယ်။
၃) Diet ပြုလုပ်ခြင်းဟာအိပ်စက်ခြင်းကိုထိရောက်မှုရှိစေသလား?
ကလေးများအနေနဲ့ အိပ်ရာဝင်ချိန်မှာ နွားနို့တစ်ခွက် သောက်သုံးပေးကြပါတယ်။ နွားနို့မှာပါဝင်တဲ့ ကယ်လ်ဆီယမ်ဟာအိပ်စက်ခြင်းရဲ့ ဟော်မုန်းဓာတ်ဖြစ်တဲ့ Melatonin ကိုထုတ်လုပ်ပေးခြင်းအတွက် လိုအပ်တဲ့ အမိုင်နိုအက်ဆစ်တစ်မျိုးကိုထုတ်ခြင်းမှာအထောက်အကူပေးပါတယ်။ ချယ်ရီသီးဖျော်ရည်၊ ဂျင်း၊ သစ်ကြားသီးနဲ့ မြေပဲတို့ဟာလည်းMelatoninဓာတ် ပေါကြွယ်ဝတဲ့ အစားအသောက်များ ဖြစ်ပါတယ်။
ကဖင်းဓာတ်နဲ့ ယမကာတို့ကတော့ အိပ်စက်ခြင်းအတွက် အဓိကထိခိုက်စေတဲ့ အရာတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ သင်အိပ်စက်သင့်တဲ့ အချိန်ထက် လျော့နည်းပြီးအိပ်နေရတယ်ဆိုရင်တော့ ညဘက်မှာကဖင်းဓာတ်နဲ့ အရက်သေစာကိုရှောင်ရှားပေးဖို့ လိုအပ်မှာပါ။
အိပ်ရာဝင်ချိန် ဆာလောင်ခြင်းဟာလည်းအိပ်ပျော်စေဖို့အတွက် ခက်ခဲစေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ညစာပုံမှန် စားပေးပြီးအိပ်ရာဝင်ချိန်မှာအဆာပြေစားစရာမုန့်လေးတစ်ခုစားပြီးအိပ်စက်ခြင်းဟာအိပ်ပျော်ဖို့အတွက် ပိုမိုဖြစ်စေပါတယ်။
၄) လျင်မြန်စွာအိပ်မောကျနိုင်စေမယ့် နည်းလမ်းတွေ သိပြီလား?
အဆင့် ၁ – ပုံမှန်အိပ်စက်မှုအချိန်ဇယားတစ်ခုသတ်မှတ်ပါ။ ပုံမှန်မရှိတဲ့ အိပ်ချိန်ဟာအိပ်မောကျခြင်းကိုထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပုံမှန် အိပ်ရာဝင်ချိန်နဲ့ အိပ်ရာထချိန် တစ်ခုကိုသတ်မှတ်ထားပြီးထိုအတိုင်း ပြုမူဆောင်ရွက်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
အဆင့် ၂ – သက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေတဲ့ အိပ်ရာဝင်အလေ့အထတစ်ခုကိုပုံမှန်ဆောင်ရွက်ပါ။ စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေဟာအိပ်မောကျစေခြင်းကိုခက်ခဲအောင် ပြုလုပ်တဲ့ အတားအဆီးများပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင် အိပ်ရာမဝင်ခင် စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကိုဖြေဖျောက်ပါ။ သင့်ကိုသက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေတဲ့ အိပ်ရာဝင် အလေ့အထတစ်ခုကို ကြိုးစားတည်ဆောင်ကြည့်ပါ။ အိပ်ရာမဝင်ခင် ရေနွေးနွေးလေးနဲ့ ရေချိုးခြင်းဒါမှမဟုတ် ကဖင်းဓာတ်မပါတဲ့ လက်ဖက်ရည်တစ်ခွက် သောက်သုံးခြင်းတို့ကိုလည်း ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
Previous Previous post: M-ပိုက်ဆံအကြောင်း သိကောင်းစရာအချို့နဲ့ ရင်ခုန်စရာအထူးအစီအစဉ်များ
Next Next post: ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်သူတွေကို တစ်နှစ် ဒေါ်လာ ၁၀၀၀ ပေးမယ့် အမေရိကန်ပြည်နယ်
သားအိမ်ခေါင်း ကင်ဆာ၏ အဖြစ်များဆုံး လက္ခဏာများ
အမျိုးသမီး​တွေရဲ့၈ဝရာခိုင်​နှုန်​း​လောက်​ကသူတို့ရဲ့ဘဝမှာHPV ( ကာလသား​ရောဂါ ) ဖြစ်​ဖူးကြပါတယ်​။ Post Views: 2,983
Published: October 23, 20173:59 am Updated: March 9, 20192:27 am